Waa maxay sababta Medium.com muhiim ugu tahay Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta | Martech Zone
Qalabka ugu fiican ee suuqgeynta internetka ayaa si joogto ah isu beddelaya. Si aad ula jaanqaado wakhtiyada, waxaad u baahan tahay inaad dhegtaada dhulka dhigto, si aad u soo qaadato aaladaha cusub uguna waxtarka badan ee loogu talagalay dhismaha dhagaystayaasha iyo isu-beddelka taraafikada.
Istaraatijiyadaha qorista ee SEO waxay xoojineysaa muhiimadda "koofiyad cad" oo ka kooban iyo wadaagis, si aad uga faa'iideysan karto baloogyada ganacsiga, websaydhada maamulka, iyo Twitter si aad u dhisto sumcaddaada dijitaalka ah. Barnaamijka dhexdhexaadka ah ee 'Web Medium' ayaa hadda abuuraya guux aad u weyn maxaa yeelay wuxuu awood u leeyahay inuu keeno noocyada dhagaystayaasha saxda ah faylalkaaga internetka.
Maxaa Dhexdhexaad ah?
Barnaamijka Medium.com ee bilaashka ah ayaa ku cusub goobta, isagoo toos uga muuqday webka bishii Julaay 2012 ka dib markii la helay taageerida Twitter. Dhexdhexaad waa degel ku-kooban mawduuc, websaydh yar oo isku xidha dhagaystayaasha iyo maqaallo ku habboon oo waxtar u leh noloshooda.
Waxyaabaha lagu qoro baloogyada iyo maqaallada lagu dhejiyay Dhexdhexaadku waa dukumiintiyo nool, oo leh nidaam faallooyin firfircoon oo u oggolaanaya akhristayaasha inay muujiyaan qodobbada muhiimka ah oo ay ku daraan faallooyinka dhinacyada. Isku day inaad qiyaasto nooc qurxoon oo ka mid ah muuqaalka "Track Changes" ee Microsoft Word aadna haysatid.
Faallooyinka lagu daro maqaalkaaga waa kuwo gaar loo leeyahay illaa aad dib u eegto oo aad calaamadeyso faallooyinka si ay u daawadaan dadweynaha. Tani waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu wadi karo dood qiimo leh.
Twitter isku dhafan
In kasta oo Dhexdhexaadku weli ku jiro beta, waxaad ku bilaabi kartaa madax bilow markaad saxiixdo koonto bilaash ah adoo adeegsanaya soo galitaanka shirkaddaada ee Twitter. Taasi waa sax: wax walboo waa Twitter-keedii Dhexdhexaad.
Qoraaladaadu waxay ku xirnaan doonaan bartaada Twitter-ka, taas oo u sahlaysa dadka inay raacaan joogitaankaaga bulshada. Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah ee ku raaxeysta qoraalkaaga waxay garaaci karaan badhanka "Talo soo jeedin", taas oo gacan ka geysan doonta kor u qaadista qiimeynta Medium.com.
Akhristayaashu sidoo kale waxay si fudud ula wadaagi karaan qoraaladaada Twitter ama Facebook. Faallooyinka waxay kuxiran yihiin aaladda Twitter-ka, marka waxaad si fudud ula socon kartaa taageerayaasha oo aad ugu dari kartaa shabakadaha warbaahinta bulshada.
Markay dadku wax ka qorayaan Dhexdhexaad, badanaa waxay iska indha tirayaan aaladda mitirka. Si kastaba ha noqotee, adeegsigooda-saaxiibtinimo lambarrada iyo garaafyada si fudud ayaa loogu dari karaa warbixintaada maalinlaha ah.
Marka koontadaada la oggolaado, waxaad booqan kartaa liiska ugu muhiimsan oo guji “Stats”. Halkan waxaad ka heli doontaa nidaam jaantus ah oo qoraya aragtidaada guud, akhriska dhabta ah, iyo talooyinka bishii la soo dhaafay.
Qiyaasta akhrisku waxay ku siineysaa boqolkiiba inta qof ee ku dhex wareegaya mawduucaaga si aad u aragto, marka laga soo tago kaliya inaad riixdo maqaalka. Shaashadan bilowga ahi waxay ku siinaysaa aragti dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan qoraaladaada.
Haddii aad jeceshahay inaad ku soo dhaweyso oo aad u aragto lambarrada qoraaladaada shaqsiyeed, kaliya guji cinwaanka maqaalka. Jaantusku si otomaatig ah ayuu isu hagaajin doonaa si uu u muujiyo qiyaastaada taraafikada ee maqaalkaas keliya.
"Akhriska" iyo "Recs" tabs sidoo kale waa la riixi karaa, si loo soo saaro garaaf muuqaal ah mid kasta oo ka mid ah qeybahan. Hadaad ku noqoto menu-ka weyn, waxaad daawan kartaa waxqabadka qoraaladaada. Dhagsiga qaybtan ayaa ku tusi doonta liistada cidda kugula talisay ama faallo ka bixisay qoraaladaada, markaa waad la xiriiri kartaa iyaga goor dambe.
Waqtigan xaadirka ah, isticmaaleyaashu waa inay ku martiqaadaan kooxda tifaftirka ee Medium.com si ay u bilaabaan daabacaadda websaydhka. Waxaad si sahal ah isaga diiwaan gelin kartaa koonto Akhriste waxaadna geli kartaa liiska si aad uhesho tafatiraha. Isticmaal waqtiga sugitaanka si aad uga raadsato qoraayo kale niche, ka faallood qoraalada la xiriira, oo kor u qaad muuqaalka shirkaddaada.
Markaad xaqiijin ka hesho Medium.com, waad bilaabi kartaa hawsha qoritaanka iyo daabacaadda. Nidaamka qoritaanka waa iskaashi sidoo kale. Dhexdhexaadku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la wadaagto xubnaha kale ee waxqabadyada socda, kuwaas oo wax ka dhihi kara waxna ka geysan kara wax soo saarkaaga dhammaaday.
Tags: sentimitirnidaamka maamulka contentdhexdhexaadsheeko
Bogagga: Naqshadeynta Isdhexgalka, Naqshadeynta Wajahadda Isticmaalaha, Naqshadeynta Isticmaalaha Isticmaalaha
Waxyaabaha ay ku habboon tahay: Mawduucyada, Waddooyinka, Soo Degitaanka iyo Beddelka